Ukusetyenziswa kwefowuni kwe-IETT kunye nabaqhubi beeBhasi zikaRhulumente zaBucala kuyatyhutyha | RayHaber
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara34 IstanbulUkusetyenziswa kwefowuni kwe-IETT kunye nabaqhubi beeBhasi zaBucala kuyatshintsha
26 / 11 / 2019 34 Istanbul, IETT, JIKELELE, Highway, AMAZIKO, Systems Wheel Wheel, ZOMHLATHI, Sithili saseMarmara, yethi, ETURKEY
Iett kunye neebhasi zikawonkewonke zokusebenzisa iifowuni zangasese ziyancipha ekuhambeni
I-IETT General Directorate yeebhasi kulawulo olwaqalwa ngabaqhubi bebhasi, i-2019 ngonyaka ekuhambeni kwayo bathetha nesohlwayo kwiwaka le-294.
I-Istanbul Electric Tramway kunye neTunction Operation (IETT) Icandelo Lolawulo Jikelele liqhuba uhlolo ukwenzela ukubonelela ngezithuthi ezikumgangatho ophezulu kunye nezikhuselekileyo zabemi belo lizwe. Ngokwemigaqo yoluleko ethintelwe ngokungqongqo 'ukusetyenziswa kwefowuni yeselfowuni ngelixa uqhuba' izohlwayo ezibekiweyo kulwaphulo-mthetho kuye kwaba luphawu olubonakalayo.
Ukusetyenziswa kwefowuni ekuZuleni Inani lezohlwayo Inani labasebenzi
ukhohlokhohlo 3.546 1.593 2170 1.104
Ukophulwa konyaka kwe-2018- 2019 kunye netafile yezohlwayo
UTSHINTSHO LUHLAZIYIWEYO HALF
Kwi-2018, i-378 ishumi lamawaka e-450 yagwetywa i-2 iwaka i-170, kuquka umqhubi we-3 IETT, abantu be-546 baliwaka lamawaka e-2, i-548 iwaka le-3.
Kwi-2019, umqhubi we-190 IETT wagwetyelwa i-450, ngelixa umqhubi webhasi eyi-104 yabucala yeebhasi wanikwa iwaka le-593.
Ndiyabulela kuhlolo, inani labaqhubi abafunyenwe benze isenzo sokuphula umthetho kwi-2019 lehlile phantse kabini xa ithelekiswa ne-2018.
IMISEBENZI IYA KULULA
I-IETT ine-83 yamanqaku oluleko inqaku labaqhubi kunye neesuphavayiza. Uhlengahlengiso oluza kwenziwa kwixesha elizayo, lo mgaqo ujolise ekunyanzeliseni izohlwayo ezingqongqo kwi-kullanmak kusetyenziswa iifowuni eziphathwayo ngelixa uhamba ". Ukongeza, ekubonakalisweni kolwaphulo-mthetho oluxhaphakileyo lwabaqhubi beeBhasi zaBucala, i-IETT igqibe kwelokuba iqinise ulawulo lwayo kwesi sikhokelo ngaphakathi kwesakheko segunya layo.
Abahlali base-Istanbul banokuthumela izicelo zabo, iziphakamiso kunye nezikhalazo malunga neebhasi kunye nomgca weMetrobus ngokusebenzisa iZiko leeFowuni le-ALO 153, isicelo seMobiett, ii-akhawunti zeendaba ze-IETT zentlalo kunye newebhusayithi.
Abaphathi be-IETT bakhethe u-Özel
Izithuthi eziqeqeshwe kubaqhubi beebhasi baseburhulumenteni eKayseri
Umqhubi woBuntu beBhasi Ubuntu Awufi
Ingxaki yokuPheliswa kweLayisensi yePhepha-mvume laBaqhubi beNkonzo eIstanbul…
I-Bursa yoLuntu yeeNkqubo zeBhasi yeBhasi yangasese Khupha phantsi
Isatifikethi sokufikeleleka kwiBhasi kaRhulumente yabucala
Abaqhubi beebhasi zikawonke-wonke zabucala e-Kahramanmaraş…
Umgaqo woThutho lwaBasemagunyeni bemiSebenzi yabucala eKorucuk
Isibhengezo sokuQala esidlangalaleni sokuSebenza kweeBhasi zoLuntu eziPhandle
Abathengisi bamabhasi karhulumente kwiindaba zeSakarya
I-10 Piece entsha ye-Bus yomphakathi eyaqalwa eKaramanda
Iindaba ezonwabileyo kwiSakarya ibhasi yomphakathi
I-51 ibhasi entsha kawonkewonke yaqala inkonzo kwi-Şanlıurfa
Iindleko zeeBhasi zikaRhulumente eAmyonkarahisar
Iibhasi zikawonke-wonke zihlangene neTram kwiiNgxelo!
Ulawulo oluqhelekileyo lwe-Iett Enterprises
umgca we metrobus
Ukusetyenziswa kwefowuni ekuZuleni